Capernaum(2018) | MM Movie Store
တရားရုံးတှငျ အမှုတဈခုကိုစဈဆေးနသေညျ…….တခွားအမှုမြားနှငျ့မတူ …အတျောထူးခွားသညျ…အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော တရားလိုက ၁၂နှဈအရှယျ ထောငျကနြသေညျ့ကောငျလေးတဈယောကျဖွဈသညျ….
တရားအစှဲခံရတဲ့သူတှကေ ဒီကောငျလေးရဲ့ မိဘတှပေငျ….ပွောရရငျ သားက မိဘ (၂)ပါးကို တရားပွနျစှဲဆိုခွငျးဖွဈသညျ….တရားသူကွီးက မိဘတှဖွေဈတဲ့သူကိုမေးတယျ…“ခငျဗြားတို့ တရားလိုဖွဈတဲ့ဒီကောငျလေးကိုသိလား”“သိပါတယျ ကြှနျမတို့သား ဇိမျးပါ ထောငျကနြတေဲ့ ကြှနျမတို့သားပါ”
” ဘာဖွဈလို့ ထောငျကတြာလဲ သိလား”“သိပါတယျ သူက ကလေးဆနျခဲ့ပွီးတော့ တခွားတဈယောကျကိုဓါးနဲ့ထိုးခဲ့လို့ပါအဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ရုံးခြိနျးမှာတောငျ ကြှနျမတို့ လငျမယား(၂)ယောကျသကျသပေါခဲ့ပါသေးတယျအခုက ဘာကိစ်စကြှနျမတို့ကိုတရားရုံးကိုချေါမှနျးနားမလညျဘူးတရားသူကွီးမငျးရှငျ့”
အဲ့ဒီနောကျ တရားသူကွီးက တရားလိုဖွဈတဲ့ကောငျလေးကိုမေးတယျ….“သားခု တရားရုံးကို ဘာလို့ရောကျနတောလဲသိလား”“ဟုတျကဲ့သိပါတယျ.. ကြှနျတျောမိဘတှကေိုတရားစှဲခငျြလို့ပါ”“မိဘတှကေို ဘာလို့တရားစှဲခငျြရတာလဲ”“ကြှနျတေျာ့ကိုမှေးဖှားခဲ့လို့ပါ”အသကျ(၁၂)အရှယျကောငျးလေး ပွောရရငျ လူမမယျအရှယျလေးလို့တောငျဆိုရမညျထငျသညျ….
ဒီလိုကောငျလေးက ဒီလိုပွောတာ တကယျအံအားသငျ့စရာပငျ…ဒီလိုပွနျဖွလေိုကျတဲ့ ဂဈြကနျကနျကောငျလေးရဲမကျြနှာမှာ နာကငျြကွှကှေဲခွငျးတှအေတိုငျးသားမွငျနရေတယျ…ဇာတျလမျးအရဲ့အစပိုငျးမှာတငျ မိဘနဲ့သားသမီးကွားထူးခွားတဲ့ဆကျဆံရေးကိုတှနေို့ငျသလိုစိတျဝငျစားစရာတှေ ဆကျကွညျ့ခငျြစိတျတှအေမြားကွီးပေါကျအောငျဆှဲဆောငျနိုငျတယျ..
ဘာကွောငျ့တရားစှဲခငျြရတာလဲ…မိဘတှကေရော တရားရုံးမှာဖွတေဲ့ပုံစံက အပိုအလုပျတှလောလုပျနရေတဲ့ပုံ..သူတို့ရှငျသနျကွီးထှားကွတဲ့ပုံစံတှကေ ဘယျလိုမြိုးတှလေဲ….ဒီလိုနဲ့ ဆကျကွညျ့တာ တကယျလညျးအရမျးကိုကောငျးလှနျးတဲ့ ကားကောငျးတဈကားဖွဈခဲ့တယျ…
ဒီကားက အကောငျးဆုံးနိုငျငံခွားအျောစကာဆု ဆနျကာတငျစာရငျးဝငျခဲ့သလို အခွားဆု(၂၂)ဆုလညျးရရှိခဲ့တယျ..Ratingတှကေလညျးမွငျတဲ့အတိုငျးပဲ…ကားကောငျးမို့ စပှိုငျလာဖွဈမယျစိုးလို့ ကိုယျတိုငျပဲခံစားကွညျ့ပါ….
တရားရုံးတွင် အမှုတစ်ခုကိုစစ်ဆေးနေသည်…….တခြားအမှုများနှင့်မတူ …အတော်ထူးခြားသည်…အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တရားလိုက ၁၂နှစ်အရွယ် ထောင်ကျနေသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်….
တရားအစွဲခံရတဲ့သူတွေက ဒီကောင်လေးရဲ့ မိဘတွေပင်….ပြောရရင် သားက မိဘ (၂)ပါးကို တရားပြန်စွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်….တရားသူကြီးက မိဘတွေဖြစ်တဲ့သူကိုမေးတယ်…“ခင်ဗျားတို့ တရားလိုဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုသိလား”“သိပါတယ် ကျွန်မတို့သား ဇိမ်းပါ ထောင်ကျနေတဲ့ ကျွန်မတို့သားပါ”
” ဘာဖြစ်လို့ ထောင်ကျတာလဲ သိလား”“သိပါတယ် သူက ကလေးဆန်ခဲ့ပြီးတော့ တခြားတစ်ယောက်ကိုဓါးနဲ့ထိုးခဲ့လို့ပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ရုံးချိန်းမှာတောင် ကျွန်မတို့ လင်မယား(၂)ယောက်သက်သေပါခဲ့ပါသေးတယ်အခုက ဘာကိစ္စကျွန်မတို့ကိုတရားရုံးကိုခေါ်မှန်းနားမလည်ဘူးတရားသူကြီးမင်းရှင့်”
အဲ့ဒီနောက် တရားသူကြီးက တရားလိုဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုမေးတယ်….“သားခု တရားရုံးကို ဘာလို့ရောက်နေတာလဲသိလား”“ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်.. ကျွန်တော်မိဘတွေကိုတရားစွဲချင်လို့ပါ”“မိဘတွေကို ဘာလို့တရားစွဲချင်ရတာလဲ”“ကျွန်တော့်ကိုမွေးဖွားခဲ့လို့ပါ”အသက်(၁၂)အရွယ်ကောင်းလေး ပြောရရင် လူမမယ်အရွယ်လေးလို့တောင်ဆိုရမည်ထင်သည်….
ဒီလိုကောင်လေးက ဒီလိုပြောတာ တကယ်အံအားသင့်စရာပင်…ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးရဲမျက်နှာမှာ နာကျင်ကြွေကွဲခြင်းတွေအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်…ဇာတ်လမ်းအရဲ့အစပိုင်းမှာတင် မိဘနဲ့သားသမီးကြားထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတွေ့နိုင်သလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ ဆက်ကြည့်ချင်စိတ်တွေအများကြီးပေါက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်..
ဘာကြောင့်တရားစွဲချင်ရတာလဲ…မိဘတွေကရော တရားရုံးမှာဖြေတဲ့ပုံစံက အပိုအလုပ်တွေလာလုပ်နေရတဲ့ပုံ..သူတို့ရှင်သန်ကြီးထွားကြတဲ့ပုံစံတွေက ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ….ဒီလိုနဲ့ ဆက်ကြည့်တာ တကယ်လည်းအရမ်းကိုကောင်းလွန်းတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ခဲ့တယ်…
ဒီကားက အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားအော်စကာဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့သလို အခြားဆု(၂၂)ဆုလည်းရရှိခဲ့တယ်..Ratingတွေကလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ…ကားကောင်းမို့ စပွိုင်လာဖြစ်မယ်စိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားကြည့်ပါ….